Masaajida Sweden oo codsaday in amaankooda la kordhiyo | Somaliska
Maamulada Masaajida Sweden ayaa dowlada ka codsaday in la kordhiyo amaankooda. Codsi ay u direen wasiirka isdhexgalka Erik Ullenhag ayay kaga codsadeen in la kordhiyo taageerada dowladu ay siiso masaajida si kor loogu qaado amaanka. Ullenhag ayaa sheegay in uu wahadal kala yeelan doono Muslimiinta sida ay dowladu u saacidi karto.
Horay ayaa dowlada Sweden taageero gooni ah oo dhinaca amaanka ah siisay koobaha ay Yuhuudu ku cibaadaystaan ka dib markii weeraro dhowr ah lagu qaaday. Masaajida Muslimiinta ayaa sanadihii dambe noqday bartilmaameed lala eegto weeraro joogto ah. Waxaa ugu dambeeyay isbuucii la soo dhaafay oo calaamado cunsuriyad ah lagu sawiray albaabada Masjidka Stockholm.
Ullenhag ayaa sheegay in Booliska ay masuuliyadooda tahay in ay sugaan amaanka goobaha cibaadada Muslimiinta balse uu kala hadli doono sidii kor loogu qaadi lahaa amaankooda. Waxyaabaha loo sameeyay Yuhuuda ayaa waxaa ka mid ah in lagu xiray kaamirooyin goobahooda si loo duubo cida weerarka geysatay. Ullenhag ayaa sheegay in Yuhuuda ay ka midyahay qowmiyadaha laga tirada badan yahay ee Sweden ay aqoonsantahay, halka Muslimiintu aysan qowmiyad ahayn balse waxa uu qirtay in bulshada Sweden uu ku soo batay Islaam naceybka.
asc kuli walaalaha muslimka ah cadawga muslimka alle ha jabiyo waxa qaska wadana waa dad doonaya in uusan aduunka dagin ayagana alle ha inaga qabto ayan leenahay masaajinka dadka jooga waxan u sheegayaa in uu alle ilaashanayo goobaha lagu caabudo waxba ha wal walina wabilaahi towfiiq